China EAS Retail Store 58khz AM Shop fivarotana Alarm anti-steal Aystem Gate-PT309 mpanamboatra sy mpamatsy | Etagtron
Mpivarotra mpivarotra antsinjarany Fanairana fanoherana ny halatra EAS
•Amboary ny maha-zava-dehibe ny zavakanto sinoa sy tandrefana, vakio ny fisainana nentim-paharazana, asehoy ny fahamboniana aorian'ny fitambarana.
•Fisehoana ivelany sy lamaody, fampitana hazavana mahery, fanoherana tsara hitazomana ary tazomy ny endrika.
•Vata ambany vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny fanoherana fanoherana, fanoherana ny toetr'andro ary fanoherana ny harafesina.
•Ny plug amin'ny herinaratra dia milalao
0.6-2.5m (depneds amin'ny tag sy ny fialofana eo amin'ny toerana)
1.Izy io dia natao ho vahaolana mahomby amin'ny fiarovana ny magazinao amin'ny fangalarana amin'ny fampiasana ny AM Technology.
2.Izany dia rafitra EAS mifototra amin'ny mpandeha an-tongotra roa miaraka amin'ny fanoherana avo lenta ny fanelingelenana sy ny fanovana tsotra, izay mahatonga azy io ho safidy azo antoka ho an'ny fivarotana rehetra.
3. Ity rafitra ity dia azo apetraka amin'ny habaka tsy voafetra amin'ny toerana iray. Ny fikirakirana fampifangaroana tsotra dia ahafahan'izy rehetra miasa miaraka.
4. Ho an'ny varavarana ety, azo atao mihitsy ny mampiasa antena tokana - ary ho an'ny varavarana misimisy kokoa dia azo ampiana antena maro kokoa. Ny rafitra AM dia misy ny fitadiavana jammer hisorohana ny mpangalatra manakana ny rafitra raha manandrana mandao ny magazay miaraka amin'ny entana halatra.
Manome fisorohana ny maso amin'ny halatra
♦Manarona 1.7 ~ 1.8m miaraka amin'ny marika DR avy amin'ny antennas roa. Fampisehoana latabatra miaraka amina fametrahana mora. Ny antena voalohany dia afaka miasa amin'ny antena faharoa.
Teo aloha: EAS SYSTEM AM System Acrylic ambony kalitao 58KHz vavahady fiambenana fitafiana vavahady-PG300
Manaraka: EAS Alarm Security AM 58khz EAS Anti-fangalarana rafitra Fivarotana fitafiana Antenna-PG218